MM Abiy Ahmad: Wal tuffachuurra wal gorfachuutu nu baasa - BBC News Afaan Oromoo
MM Abiy Ahmad: Wal tuffachuurra wal gorfachuutu nu baasa
Aanga'oonni mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Federaalaa haala yeroo irratti kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin magaalaa Finfinneetti mari'ataniiru.
Marii kana kan gaggeessan Ministira Muummee Abiy Ahmad, Ministira Ittisa Biyyaa Lammaa Magarsaa fi Pirezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaati.
Marii kanarratti jaarsolii biyyaa, Abbootii Gadaa, Abbootii Amantaa, harmootii fi dargaggoonni hirmaatan haala amma biyyi keessa jirtu irratti gaaffilee fi yaada kaasaniiru.
Miiidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti, hirmaattonni marichaa waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa cimsuurratti xiyyeeffachuun yaada kennan.
''Olaantummaan seeraa har'arraa eegalee kabajamuu qaba. Akka biyya bulchuu dandeenyu agarsiifnee kaanee har'ammoo duubatti deebinee ofumaa yoo of cabsine yoo warri kaanimmoo wuskii dhuganii harka rukutanii gammadan gadda guddaatu nutti dhagahama'' jedhan maanguddoon walgahicharratti hirmaatan tokko.
Hirmaattonni walga'ichaa rakkoo jiru duudhaa fi safuu qabnuun furachuun tokkummaa keenya bu'uura cimaarra dhaabuutu mala jechuun waliif dhaamaniiru.
''Kanneen taa'anii nu burjaajessan nurraa dhowwaa, seeratti nuuf dhiyeessaa. Miidiyaan seera qaba(miidiyaa kam akka ta'e hin ibsine), innis seera kabajee haa deemu. Maaliif uummata burjaajessa? Waan uummata wal nyaachisu dabarsaa jiran. Kanaafuu isas seeratti nuuf galchaa'' jedhan maanguddoon tokko walga'icha keessaa.
Maanguddoo kan biraan ammaoo akkas jedhan, ''Nuti karaa dheeraa deemaa jirra, laga ce'uu hedna. Diina baay'eetu nutti jira, budaatu nu nyaate. Budaa sanatti qoricha ullee of keessaa baasnee ofiimmoo walitti deebinee tokko ta'uu qabna.''
Aanga'oonni hoo maal jedhan?
Pirezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimmallis Abdiisaa rakkoo tibbana Oromiyaa keessatti uumamee ture qaamolee tasgabbeessan galateeffataniiru. ''Aggaammii hedduu keessa darbinee as geenye. Gufuu nu mudatu of duraa buqqisuun faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuuf yoomiyyuu cimnee hojjenna.''
''Dukkana keessa waliin dabarree akka dhufne walumaan beekna. Karaa irra dhufne jajjabeeffannee gaaga'ama tokko malee fedhii fi faayidaan Oromoo akka mirkanaa'uuf qaamni hunduu hojjechuu qaba,'' jedhan.
Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee itti fufa kan jedhan Obbo Shimallis ''Ammaan booda garuu olaantummaa seeraa rakkoo keessa galchinee biyyas Oromoos diiguu hin dandeenyu,'' jedhan.
Ministirri Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa akkuma kalee har'as ilaa fi ilaameedhaan deemuutu barbaachisa jedhan.
''Kaleessas asiin kan nu ga'e wal bira dhaabbannee waliin mari'achuu keenya. Waan waliif tusinee walgargaarre qofaaf as geenye. Dirree waraanaatti baane waan waraana addaa gaggeessineef miti. Maanguddoonni keenya as jirtan gorsaa fi qeeqa isin nuuf kennitan fudhanneetu as geenye. Isarraa bu'aa arganne. Har'as kana qofatu nu baasa'' jedhan Obbo Lammaan.
''Akka laayyootti as hin geenye. Dogoggora jiru mari'annee hiikna malee karaa tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchuun ta'uu hin qabu. Mari'atanii hojjechuun dhimma murna muraasaa osoo hin taane dhimma hunda keenyaati, '' jedhan.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gamasaaniitiin tokkummaan yoomiyyuu caalaa yeroo barbaachisutti yeroo ammaa kana qoramuu hin qabu jedhan.
''Tokkummaan gaafa cabu bu'aansaa kunooti. Oromoon lagaa fi amantiin walqooduun hin hafu. Kanaafuu tokkummaatu nu baasa. Rakkoo tibbana uumameen eenyu akka du'e wal nama hin gaafachiisu. Wal ajjeefne, wal miine. Hin ta'u kun,'' jedhan.
''Kanaan duras kan injifanne tokkummaa keenya waan cimsineef. Har'as yaada filatamaa namni qabu yaadaan falmee amansiisuu danda'a. Yaadi fooyya'aan jiraannaan dubbisnee ,dhaggeeffannee keetu sirriidha jennee wal amanna rakkoon hin jiru.'' jedhan.
Gaaffii Oromoo fi Sirna Federaalaa
Hojii gaaffii uummata Oromoo booddeetti deebisu hojjechaa hin jirru kan jedhan Ministirri Muummee Abiy Ahmad, sirna federaalizimii cimsuuf ni hojjenna jedhan.
''Sirna federaalaa balleessuufi inni jedhamu Sirni federaalaa Itoophiyaa keessa hin turreem. Uummanni Oromoo kana beeka. Dargaggoon Amboorratti shukkaaraa konkolaataa tokko wayita dhaabsisu mootummaan ajjeesaa tureen.
Kun sirna federaalaa miti. Mootummaa keenya filachuu hin dandeenyu turre. Gaafa lammaa Magarsaa filannu qoratamnee turre nuti. Hin dandeessan jedhamnee. Federaalizimiin hin turre, sobadhaa. Amma isa dhugaa fiduuf qabsaa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jirru, kuni soba,'' jedhan.
Diinni Oromoo gidduu seenee Oromoon akka diigamuuf gorsuu hin qabu kan jedhan Ministirri Muummee Abiy Ahmad kana keessatti jaarsoliin ga'eesaanii ba'uu akka qaban dhaamaniiru.
''Ammas jaarsoliin biyyaa bakka rakkoon jiru deemaatii ilaalaa. Mootummaas dubbisa. Mootummaan jecha keessan keessaa baanaan isin murteessaa. Waltuffachuurra wal gorfachuu wayya. Mootummaa kana guyyaa lamatti diiguu dandeenyu warri jedhan jiru.
Kanaaf baay'een gadda. Humna akkasii kan qaban yoo ta'e waggaa 27 wayita dararamnu eessa turan? Kun sirrii miti. Mootummaan Oromoo wayita aangoo qabatuu kan wal tuffannu? Kan salphatee akkas waltuffachuun?''
Mariin kun sadarkaa godinaalee fi aanaalee Oromiyaatti gadi bu'ee kan mari'atamuu ta'uunis beekameera.
Miidiyaan hawaasaa hedduun jalaa kan cufame Donaald Tiraamp marsariiti haaraa banatan